Izindaba - Izindlela zokugcina izibuko
Izindlela zokugcina izibuko
Ngemuva kokuthenga izibuko zelanga, kuyaqabukela ukuthi banake ukunakekelwa kwezibuko zelanga. Mhlawumbe abanye abantu bacabanga ukuthi ngiyigqoka kuphela kuleli hlobo, futhi abantu abaningi bacabanga ukuthi bathenga izibuko zelanga kuphela ukuvikela imisebe ye-ultraviolet nemfashini. Ngokuqondene nezinye izibuko zelanga, ngeke bazicabangele. Eqinisweni, uma izibuko zelanga Kuvame ukungcola, futhi umsebenzi wazo uzobuthaka ngokuhamba kwesikhathi. Ngeke nje ikwazi ukumelana nemisebe ye-ultraviolet, futhi ingadala nezinkinga zempilo yamehlo akho.
Ukugcinwa kwezibuko zelanga kucishe kufane nezingilazi ezijwayelekile. Manje ake sibheke ukuthi zinganakekelwa kanjani izibuko zelanga.
1. Uma ilensi inamabala, igrisi noma izigxivizo zeminwe, sebenzisa indwangu ethambile kakotini ezintweni zokuhlobisa izibuko ezikhethekile ukusula uthuli noma ukungcola kwelensi. Ungalokothi usebenzise izipikili noma imikhiqizo enezithako zamakhemikhali ukususa amabala ku-lens
2. Uma ungagqoki, kufanele zisuswe ngokucophelela futhi zisulwe kahle. Lapho uyibeka, qala ugoqe ithempeli langakwesobunxele (thatha ohlangothini olufakiwe njengokujwayelekile), ubeke isibuko phezulu, usigoqe ngendwangu yokuhlanza ilensi, bese usifaka esikhwameni esikhethekile. Qaphela ukuvimbela ilensi nohlaka ukuthi lungaklwiwa yizinto ezilukhuni noma kukhanywe isikhathi eside.
3. Vimbela ukuvezwa isikhathi eside emanzini, cwilisa emanzini, bese ubeka endaweni eqondile ukuze uvezwe yilanga; ukutholakala kukagesi noma insimbi isikhathi eside akuvumelekile
4. Futhi unake izindawo lapho uwoyela nezinwele eziphukile kulula ukuhlangana khona, njengamathempeli namaphakethe empumulo. Khumbula, ungagezi ngamanzi ashisa kakhulu noma uwubeke endaweni enomswakama.
5. Futhi kulula ukukhubaza ifreyimu lapho uthatha izibuko ngesandla esisodwa.
6. Uma ifreyimu ikhubazekile noma ingakhululekile ukugqoka, iya esitolo se-optical ukugubha ukulungiswa kobuchwepheshe.
Naka kakhulu ukunakekelwa kwezibuko zelanga, ukuze izibuko zelanga zivikeleke ngokuphelele, futhi izibuko zelanga zivikelwe kangcono.